Warshaa Sukkaaraa Wanjii: Omishitoonni shankooraa bittaan warshaa nuuf mala jedhu - BBC News Afaan Oromoo
Lafa warshaan sukkara wanjii irra qubatee fi shankoora itti omishu hektaara 5,000 kanarraa hawaasa naannichaatu buqqa'e waan ta'eef bittaan warshichaa nu ilaallata jedhu qonnaan bultoonni naannichatti shankoora omishan.
Dhaabbilee mootummaa gariin ykn ammoo guutummaatti gara abbootii qabeenyaa dhunfaatti akka dabarfaman murtaa'e keessaa warshaaleen sukkaaraa Wanjii isa tokko.
Magaalaa Adaamaa irraa Fageenya KM 10 irratti kan argamu warshaan kun omisha shankooraa hektaara kuma 12,800 qabu keessaa heektaara 7,000 irratti qonnaan bultoota naannichaatu waldaan gurmaa'ee warshichaaf shankoora omishee dhiheessa.
Dhiheessii shankooraa warshichaa keessaa dhibbeentaa 60 tahu kan dhiheessan qonnaan bultoonni naannichaa warshaa sukkaara wanjii bittaan isaa harka keenyaa bahu hin qabu jedhu.
Warshaaleen sukkaaraa Itoophiyaa maaliif gurguramu?
Karra diinagdee damee dhunfaaf banuun maaliif?
Qonnaan bultoonni kunneen Yuniyeenii Omishtoota Shankooraa Naannoo Wanjii jedhamu hundeessanii waldan kan hojjetan yoo ta'u warshicha bitachuun mul'ata duraan qaban akka ta'e himu.
Yuuniyeenichi yeroo hundaa'u galmoota gurguddoo qabate keessaa warshaa kana guutumatti bitee dhuunfachuun isa tokkodha jedhu hoji gaggeessaa itti aanaan yuuniyeenichaa obbo Mohaammad Husseen.
"Dabarsiin mootummaan amma fide kun mul'ata keenya milkeefachuuf carraa gaariidha" jedhu.
Warshaan sukkaara wanjii lafti amma irratti qubatee fi shankoora irratti omishaa jiru hektaara 5,000 ta'u kanarraa qonnaan bulaa Oromootu buqqa'e waan ta'eef warshaa kana binnee kan qonnaan bulaa gochuun seenaa kana jijjiirudha jedhan.
"Tokkoffaa lafa warshichaa irraa Oromootu buqqa'ee inni asitti dhaabbate. Lammaffaa shankoora warshichi fayyadamu keessaa harka 60 ol kan tahu nutu dhiheessa."
"Kanaafuu bakka nuti hamma kana dhiheessaa jirrutti mootummaan warshaa kana dabarsee qaama biraatti gurguruu irra yuuniyeeniin kuni bitachuun carraa guddadha" jedhu obbo Mohaammad.
Abdiin akka yuuniyeenitti qabnu warshicha ni bitannaadha, qabeenya nuti utubnu kana bituurratti abdii guddaa qabna jedhan.
Warshichi yeroo mootummaan qabamee jiru kanatti carraa hojii argachaa hin turre kan jedhu dargaggoo Gazzaaheny Damissee, bittaa warshichaa yuuniyeeniin milkoofnaan carraan hojii argachuuf abdii guddaa nuuf taha jedha.
Qonnaan bultoonni naannichaa biroos, waan warshichaaf dhiheessinu waliin yoo ilaallu bu'aan argannu gadi aanaadha, yuuniyeenichi yoo bite garuu fayyadamummaan keenya ni dabalaa jennee abdanna jedhu.
Warshaan sukkaara Wanjii warshaalee sukkaaraa biyyattii keessatti ijaaraman warra jalqabaa keessaa tokko yoo ta'u bara 1952tti omisha jalqabe.
Yeroo ammaa waggaatti sukkaara toonii 174,000 omishaa jira. Haftee omisha sukkaaraa irraa ammoo Itaanoolii fi molasasiis ni omisha.
Warshichi anniisaa elektiriikii maddisiisuun fedhii elektiriikii warshichaa 11MW of danda'uun 20MW ammoo kuusaa biyyoolessaatti dabarsaa jira.
Gurgurtaa warshaalee sukkaaraa kanneeninii irratti korporeeshiniin sukkaara Itoophiyaa fi Ministeerri Faayinaansii waliin ta'uun sanada haal-duree gurgurtaa "Request for Information for sugar corporation Pre-privatization process" jedhamu eebla 2019 qopheesseera.
Adeemsi dhaabbilee kanneen gara dhuunfaatti dabarsuu Ministeera Faayinaansiitiin kan raawwatamu yoo ta'u dhaabbileen biyya keessaa fi alaa fedhii bittaa qaban karaa ministeerichaatti gaaffii odeeffannoo dabalataa dhiheeffachaa jiru jedhu direektarri komunikeeshinii Korporeeshinii Sukkaaraa Obbo Gaashawu Ayichiluhim.
Kunis warshaalee kanneen guutummaan yookan gariin gara dhuunfaatti dabarsuudhaaf fedhii investarootaa baruu, warshaalee kam irratti fedhiin guddaan akka jiru adda baasuu, dhaabbileen fedhii bittaa qaban bittaa akkamii akka barbadaanii fi investarootni dhaabbilee kanneen bitan madda bajataa fayyadaman baruuf akka ta'e sanadichi ni ibsa.
Guyyaan xumuraa gaaffii odeeffannoo fedhii bittaa kan dabarsiin duraa kana dhiheeffachuus hanga Caamsaa 24,2019'tti.
Fedhiin qonnaan bultoonni qaban ilalchisuun yaada kennaniin, yuuniyeenichi odeeffannoo fedhii bittaa kanarratti hirmaatee adeemsa dabarsii kanarratti hirmaachuuf karaan banaadha jedhan.